नयाँ ग्यालक्सी एस How कती गाह्रो छ? | Androidsis
नयाँ ग्यालक्सी एस How कती गाह्रो छ?
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | मोबाईलहरू, Samsung, ट्यूटोरियलहरू
जब हामी एक वक्र स्क्रीन संग एक नयाँ उपकरण को लागी, हावा मा एक प्रश्न छ। के स्क्रीन पर्याप्त बलियो हुनेछ? यो कहिले सम्म तोड्न को लागी लिन्छ? हामी सबै यस कुरामा सहमत छौं एक वक्र स्क्रीन संग एक स्मार्टफोन को डिजाइन वास्तवमै आकर्षक छ। अझ बढि यो जब यो घुमेको पर्दा एक फ्रेमलेस डिजाइन मा एकीकृत छ।
फ्रेमहरू नभएको र फोनको अगाडि प्यानलको लाभहरू किनारामा लिन सक्षम हुनु एकदम रमाइलो छ। तर कहिलेकाँही यी परिस्थितिहरूमा सौंदर्यशास्त्र सुधार गर्नुका साथै ठूलो नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ। यस्तो देखिन्छ कि यी वक्र स्क्रीनहरू झरनाहरूका लागि चुंबक हुन्। र यो धेरै सजिलो छ कि यदि यी सुविधाहरूको एक उपकरण भुइँमा खस्छ भने, यसको पर्दा सबैभन्दा खराब भएको एक हो.
1 ग्यालक्सी S8 स्क्रिन राम्रो नाजुकता रेटिंग प्राप्त गर्दछ
2 ग्यालक्सी S8 कडा सामग्री संग निर्मित छ
3 फिंगरप्रिन्ट रिडर र क्यामेरा कमजोर पोइन्टहरू
ग्यालक्सी S8 स्क्रिन राम्रो नाजुकता रेटिंग प्राप्त गर्दछ
हामी नेटमा फेला पार्न सक्षम भइसकेका छौं असंख्य भिडियोहरू जुन नयाँ सामसु model मोडेलमा विभिन्न प्रतिरोध परीक्षणहरू गरिन्छ। सामान्यतया, राज्य जसमा परीक्षण अन्त्यको स्मार्टफोन स्मार्टफोन सामान्यतया उस्तै हुन्छ। एक स्क्र्याच गरिएको फोन, क्र्याक स्क्रीन, वा लगभग ध्वस्त, पूर्ण रूपमा। तर त्यो जहाँ डाटा प्राप्त छ कि हामीलाई बताउँछ कि नयाँ गैलेक्सी S8 पकड गर्न सक्छन् कसरी।
यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ ग्यालक्सी S8, यसको कुनै पनि संस्करणमा, डबल्स। उपकरणलाई फोर्स गर्दै जुन हामीले आफ्ना हातहरूसँग जोड्न सक्दछौं मुश्किल फ्लेक्सा। र यस्तो देखिदैन कि यसले सामान्य प्रयोगको साथ कष्ट भोग्नेछ। त्यसैले हामी यसलाई कुनै विकृतिको डर बिना हाम्रो जेबमा राख्न सक्छौं।
परीक्षण मा मापन गर्न स्क्र्याच प्रतिरोधको स्तरले सकारात्मक डाटा दिन्छ। विभिन्न तीब्र वस्तुहरूको साथ स्क्रीनमा विभिन्न प्रकारका सम्भावित घर्षणहरू बनाइन्छन्। परिणाम यो छ ग्यालक्सी S8 को अगाडि प्यानल धेरै राम्रो विरोध गर्दछ। त्यसैले हामीले आफ्नो खल्तीमा यन्त्र राख्ने चिन्ता लिनु हुँदैन। यस्तो देखिन्छ कि केहि कुञ्जीहरू वा सिक्काको साथ यो प्यानल Corning Gorilla ग्लास5यो बिग्रेको छैन।
ग्यालक्सी S8 कडा सामग्री संग निर्मित छ
यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि गिलास प्यानलको प्रतिरोध र यसको पछाडि कम्तिमा पनि स्थिरता सम्भावित स्क्र्याचमा दिनहुँ हुन्छ। सामसु'sको बोलीलाई गिलासको साथ धातु फिर्ता कभर गर्नको लागि, यसले आफ्नो गृहकार्य राम्रोसँग गरेको छ। र यस्तो देखिन्छ कि उसले हरेक क्षण चिन्तित नहुने पर्याप्त प्रतिरोधी सामग्रीहरूको लागि छान्छ।
तर जस्तो अपेक्षा गरिएको पनि थियो, प्रतिरोधको सर्तमा यो डिजाइन विवरण को एक जोडी मा बाधा. धातुले बनेको क्यामेरा लेन्सलाई समेट्ने किनारामा समान प्रतिरोध हुँदैन बाँकी भन्दा त्यसैले यो लगाउन सक्छ कि उपकरण धेरै कुरूप बनाउन सक्छ। कम घर्षण उपकरणहरूको साथ परीक्षण गरेर यस धातुको किनारले चाँडै नै क्षति भोग्दछ।
फिंगरप्रिन्ट रिडरको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। धेरै क्यामेराको छेउमा उनको स्थिति को लागी शुरुआतबाट आलोचना गरीयो। हुनसक्छ एक मोडेलमा शर्त जस्ता स्थानको बाँकीसँग कुनै सरोकार छैन। तर यसले के गर्छ निस्सन्देह यदि हामी हाम्रो खुट्टा क्यामेरा लेन्समा धेरै पटक राख्छौं। यसैले यसको स्थान लाईक नगर्न बाहेक, यसमा समावेश गरिएको सामग्रीले अधिक नाजुकता देखाउँदछ.
फिंगरप्रिन्ट रिडर र क्यामेरा कमजोर पोइन्टहरू
अपवाद बाहेक, यो स्पष्ट देखिन्छ कि सामसुले यसको गिलास प्यानलहरूमा प्रतिरोध लिनको लागि गरेको लगानी राम्रोसँग चुक्ता भएको छ। फोनको धार पनि धातु सामग्रीबाट बनेको छसम्पूर्ण परिवारमा चलन छ। र परीक्षण पछि यो लाग्छ सजिलै खरोंच छैन.
भन्नुपर्दा, सामान्य दैनिक प्रयोगको साथ यसले चिन्ताजनक बिग्रने कुरा पनि सामना गर्नुपर्दैन। यो ब्लेडको साथ परीक्षण गर्दा क्षतिग्रस्त हुन्छ। तर यो केहि यस्तो चीज हो जुन यी सामग्रीहरू कत्तिको प्रतिरोधी छन् भनेर नाप्न मद्दत पुर्‍याउँछ। निश्चित रूपमा, यस्तो देखिन्छ कि सामसु fromबाट दायराको यो नयाँ शीर्ष "नरम" हुनेछैन।, र तपाईं हामी संग राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं यी प्रख्यात प्रतिरोध परीक्षणहरूको के सोच्नुहुन्छ?। सामान्य कुरा यो हो कि हाम्रो नयाँ स्मार्टफोनहरूले यति धेरै यातना भोग्नुपर्दैन। आगो, पानी, झरना, ब्लेडहरू ... तर हामी यो थाहा पाउन उपयोगी छ कि हामी नयाँ मोबाइलले समस्यामा परेको छ भन्ने डर बिना हामी शान्तसँग कसरी जान सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » नयाँ ग्यालक्सी एस How कती गाह्रो छ?
मिठो somoza भन्यो
म सबैलाई माया गर्छु
Dulce somoza लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्ड्रोइड अलर्ट !, ransomware के हो र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
एन्ड्रोइडका लागि सबै भन्दा राम्रो संगीत खेलाडीहरू